Ajaanib badan oo laga Daad-Gureeyay Masar – Radio Daljir
Nofeembar 10, 2015 1:24 b 0
Somalia, November 10, 2015 (Daljir) —Xukuumadda Ruushka ayaa sheegtay inay Masar u dirayso 44-diyaaradood maalinta Sabtida ah ee soo socda si ay muwaadiniintooda dalkaas ku sugan u soo daad-gureeyaan, sida ay shaacisay hay’adda federaalka gaadiidka hawada ee Ruushka.
Sodon diyaaradood ayaa tegi doona magaalada Hurghada, halka 14 diyaaradood loo dirayo magaalada Sharm el-Sheikh, si ay u soo daabulaan dalxiisyaasha Ruushka ah ee dalkaas ku sugan, iyadoo tallaabadan ay kusoo beegmayso kaddib markii la sheegay in diyaaraddii uu Ruushku lahaa ee ku dhacday Siinaay uu bam soo riday.
Warbixita ayaa lagu xusay in dalka Masar ay haatan dalxiis u joogaan 78,000 oo ruux oo Ruushan ah, kuwaasoo ay xukuumadda Moscow sheegtay inay doonayso in si nabad-galyo ah ay ugu soo celiso Ruushka.
“Arrimo amaan awgood, rakaabka waxaa loo ogoolaan doonaa oo keliya inay soo qaataan boorsooyinkooda gacanta,” ayuu yiri wasiirka xaaladaha deg-degga ah ee Ruushka, isagoo intaas ku daray. “Laba diyaaradood oo noocoodu yahay Ilyushin-76 ayaa maanta Masar kasoo qaadaya xamuulka dalxiisayaashooda.”
Sidoo kale, daad-gureynta dalxiisayaasha Ruushka ayaa la sheegay in dhowr maalmood ay socon doonto, iyadoo aan la sheegin xilliyada rasmiga ah ee la soo qaadayo dalxiisayaasha Ruushka ah ee Masar ku sugan xilligan.
Afhayeenka ururka midowga dalxiisayaasha Ruushka, Irina Tyurina ayaa horay u sheegtay in dalxiisayaasha Ruushanka ah ee Masar ku sugan aan lagu qabsi doonin inay dalkooda ku soo laabtaan, haddii aanay doonayn inay dib u laabtaan.
Hay’adda gaadiidka cirka ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in sagaal diyaaradood loo diri doono sabtida magaalada Hurghada, afar kalena ay aadi doonaan Sharm el-Sheikh si ay dalxiisayaasha Ruushka ah u soo qaadaan, kuwaasoo ay xuseen inay diyaaradahan yihiin kuwo ganacsi.
Afhayeenka madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay in go’aanka madaxweyne Putin uu ku joojiyay duullimaadyadii Ruushka ee tegi jiray dalka Masar aysan macnaheedu ahayn inuu Ruushku aamisan yahay in bam lagu soo riday diyaaraddoodii Siinaay ku dhacday, taasoo ay ku dhinteen 224-qof oo saarnaa.
Ugu dambeyn, Xukuumadda Masar ayaa sheegtay maanta in loo maleynayo in bam uu soo riday diyaaradduu Ruushku lahaa ee ku dhacday gacanka Siinaay oo ay awood ku leeyihiin xoogag taabacsan kooxda ISIS.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Talaado_10